မမဝေနှင့် မမဆူးတို့မှ သရုပ်ဆောင်ခများ ယနေ့အပီးရှင်းပေးမည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မမဝေနှင့် မမဆူးတို့မှ သရုပ်ဆောင်ခများ ယနေ့အပီးရှင်းပေးမည်
မမဝေနှင့် မမဆူးတို့မှ သရုပ်ဆောင်ခများ ယနေ့အပီးရှင်းပေးမည်
Posted by CharTooLan on Dec 13, 2010 in News |9comments
မမဆူးတို့မှ မမဝေနှင့် ယနေ့အပီးရှင်းပေးမည် သရုပ်ဆောင်ခများ
ကဲ! ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့သိကြတဲ့အတိုင်း ဟောလီးဝုဒ်ဒါရိုက်တာဆူး၏ (အသပြာထောင် တစ်ထုတ်နဲ့ သဂျီး) ဇာတ်လမ်းနှင့် အကယ်ဒမီများရှင်ဒါရိုက်တာဝေ၏ (ရတနာပုံ နေပြည်တော်ညီလာခံသဘင်) စသည့်လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်နေသော ဇာတ်လမ်းများတွင် ပါဝင်အစွမ်းပြသရုပ်ဆောင်ထားကြသော ကမ္ဘာကျော်အက်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးများနှင့် ကမ္ဘာကျော်ဒရမ်မာမင်းသား မင်းသမီးများအား ရစရာရှိသောအကြွေး (အဲ~မှားလို့) သရုပ်ဆောင်ခများအား ယနေ့ညနေ ၅နာရီနောက်ဆုံးထားပီး ဆြာဆူး နှင့် ဆြာဝေ တို့ထံ၌လာရောက်ဓားပြတိုက်ကြပါရန် အကြိုးမျှော်၍နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား ~~~~
ကိုယ်တိုင်သွား မတောင်းနိုင်သူများ ကိုကြောင်ကြီးအား ကိုယ်စားလှယ် ခန့်ပါက ၁၀% အကျိုးဆောင်ခ ယူ၍တောင်းပေးမည်။ ဂျစ်ကန်ကန်လုပ်လျင် တိုင်ရန်အဘလည်းရှာပေးနိုင်သည်။ အပိုကြေးနောက်ထပ် ၂၀%+ ဆောင်းပေးလျင် အားလုံးအဆင်ပြေစေရမည်။
ကျိုင်းတုံမှာဘိန်းထွက်တာ ရိုးသာလွန်းအားကြီးတော့ ကောက်ညှင်းမျိုးစေ့နဲ့ ဘိန်းမျိုးစေ့ မခွဲတတ်လို့ ဖြစ်မှာပေါ့ကွယ်။ စိုက်လက်စနဲ့ ဆက်သာစိုက်ပေတော့။ ကျိုင်းတုံသားတွေလို ရိုးသားတဲ့ တောင်သူတွေ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာလည်း အများကြီးရှိတယ်။ သူတို့လည်း ဂျုံစေ့နဲ့ဘိန်းစေ့ မခွဲတတ်ကြဘူး။
ဒီဇာတ်လမ်းတွေက ရန်ပုံငွေ ဇာတ်လမ်းတွေလေ .. သိတယ်ဟုတ် …
သရုပ်ဆောင်ခ … အလကားမတ်တင်း …
ဒါရိုက်တာ ကြီး ပြောတဲ့ အတိုင်းဘဲ.. ရန်ပုံငွေ မကြိုက်လည်း မရဘူး.. ကြိုက်လည်း မရဘူး။ သိတယ်မလား.. ပေါ်လက်စီ လေ.. မကောင်းတဲ့ အခန်း သရုပ်ဆောင်ရလို့.. တမြေခြားမှာ ဂဲနဲ့ ထုခံရလည်း တာဝန်မယူပါ။
အံမယ်.. ရန်ပုံငွေ ကားလေးဘာလေးနဲ့ ပွိုင့်တွေ လှိမ့်ယူနေကြတာ ဘယ်သူက ဘယ်လောက်ပွိုင့်ထဲက နှုတ်ယူလိုက်ပါ လို့ ဘယ်သူကမှ မပြောကြသေးဘူး မစည်းရုံးကြဘူး ဆော်သြတာမတွေ့ကြဖူး ဟိုမှာကပြဿနာဖြစ်နေတာကို အပျော်သဘောနဲ့ စလား နောက်လား သာ လုပ်နေကြတယ်
ဘုရားတည်ဖို့ဆိုရင်တာ ဘုရားဒကာ ဖြစ်ချင်ကြတာ လူလူချင်းကျတော့မကူညီချင်ကြဘူး
har ! ကမ္ဘာကျော်ဟောလီးဝုဒ်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုတောင် တပတ်ရိုက်ချင်နေတဲ့ အကယ်ဒမီများရှင်ဒေါ်ဒေါ်ဝေ တော့နောက်တစ်ခါ ဇာတ်လမ်းဆင်ရင် ပြောင်းဖူးရိုးနဲ့ ပေါက်ခံထိမယ်နော်
အဲဒါကြောင့် “ဓားပြ” တိုက်ရမယ်လို့ပြောထားတာတောင် ရန်ပုံငွေတွေ ပေါ်လစီတွေလုပ်ချင်သေးတယ်ပေါ့
သရုပ်ဆောင်ကြေး ..များကို သက်ဆိုင်ရာပိုစ်များတွင် ကွန်မန့်များ ပိုးစိုးပက်စက် ရေးသားခြင်းဖြင့် ထုပ်ယူနိုင်ကြောင်း ပြန်စားရေးနှင့် ပြည်သူလာဘ်စားရေးဝန်ကြီးထာန မှ ယနေ သတင်း ထပ်မံရရှိပါသည်။ မရှင်းလင်သည်များကို သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ၀င်ကြီးဂျုတ် ခိုင်မှ ထပ်မံရှင်းလင်း ကောက်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဗလိတ်ဒါးတွေ ဇာဂနာတွေ မီးညှပ်တွေ အမွှေးညှပ်တွေ ရမယ်
ယနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ရက်နေ့ ည၆နာရီ ထုတ်ပြန်ချက်။
၅နာရီ ထုတ်ပေးတာ အချိန်မှီ လာမထုတ်တဲ့ အတွက် စာရင်းပိတ်သွားပါပြီ။ ဒီမန်း အတွက် ၁၀ ကိုလည်း သိမ်းလိုက်ပါပြီ။
ယနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ရက်နေ့ ည၈နာရီ ထုတ်ပြန်ချက်။